नियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा जाने सम्भावना देख्दिनँ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता नियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा जाने सम्भावना देख्दिनँ
अन्तरवार्ता 16 views
नियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा जाने सम्भावना देख्दिनँ
अध्यक्ष, चाचान समूह
उद्यमी बाबुलाल चाचान औद्योगिक एवम् व्यापारिक घराना चाचान समूहका अध्यक्ष हुन् । राजनीतिक दलहरू अब स्थायित्व र विकासको जिम्मेवारीमा दरिनुको विकल्प नभएको बताउने चाचान समग्र समृद्धिका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा इमानदार हुनुपर्नेमा स्पष्ट छन् । वि.सं. १९९३ मा वीरगञ्जमा जन्मिएका उनी २००९ को एसएलसीमा बोर्डफष्र्ट भएर मानविकीमा स्नातक गरेपछि कपडाको पुस्तैनी कारोबारमा प्रवेश गरेका हुन् । उनको नेतृत्वमा एक दर्जनभन्दा बढी उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठान सक्रिय छन् । २०१५ मा तत्कालीन क्लथ मर्चेण्ट एशोसिएशनमा आबद्ध चाचानले त्यो संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा रूपान्तरण भएपछि सङ्घलाई दुई कार्यकाल नेतृत्व गरे । आर्थिक विकासका एजेण्डालाई प्राथमिकता दिएमात्रै राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूति हुने मान्यता राख्ने अनुभवी उद्यमी चाचान अहिले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेकाले आर्थिक विकासको ढोका खुल्नेमा आशावादी देखिन्छन् । परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यप्रति निजीक्षेत्रको धारणा, उद्योग–व्यापारको अहिलेको अवस्था र आर्थिक विकासका सम्भाव्यताबारे चाचानसँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानी :
अहिले उद्योग व्यवसायको समग्र अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
उद्यम व्यापारको क्षेत्रमा पहिलाभन्दा सुधार आएको छ । उद्योग व्यापारमा सकारात्मक सङ्केत देखिन थालेका छन् । नयाँ श्रम ऐनले श्रम सम्बन्धमा देखिएको समस्या न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले रोजगारदाता र श्रमिक दुवै पक्षलाई आआफ्नो दायित्वमा जिम्मेवार बन्न दबाब दिएको छ । यो सकारात्मक छ । खासगरी यसबाट मजदूरमा अनुशासनहीनताको समस्यालाई निकास दिने देखिएको छ । यो ऐन मजदूरको हितमा पनि राम्रो छ । काममा लाग्नेबित्तिकै स्थायी कर्मचारीसरह सेवासुविधा पाउने व्यवस्थाले मजदूरको हितलाई निश्चित गरेको छ । यसले स्थायी र अस्थायी कामदारबीच विभेदको अन्त्य गरिदिएको छ । रोजगारदाताका लागि आचरणको पनि कुरा छ । उसले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । तर, कार्यान्वयनका निकाय र अधिकारीहरू इमानदार हुनुपर्छ । यसको नियमावली आएपछि कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । निजीक्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन पनि आइसकेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले पनि लगानीको वातावरण बनाएको त छ । तर, त्यसको पनि कार्यान्वनयमा प्रभावकारिताले उपादेयता भर पर्छ ।
अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको बदलिँदो परिदृश्यलाई निजीक्षेत्रले कसरी लिएको छ ?
चुनावमा एउटा राजनीतिक धारलाई स्पष्ट बहुमत मिलेकाले अब राजनीतिक स्थायित्व आउने विश्वास गरिएको छ । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा स्थायित्वको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बिजुली कटौतीको समस्यामा पनि तुलनात्मक सुधार छ । सरकारले यो समस्या पनि १/२ वर्षभित्रमा निराकरण हुने बताएको छ । समाधान होला भन्नेमा आशावादी छौं । वित्तीय क्षेत्रमा पनि विगत वर्षको जस्तो असहजता अहिले छैन । तरलता अभावको अवस्थामा सुधार भएको छ । तत्काल केही असहजजस्तो देखिए पनि प्रदेश र केन्द्रमा नयाँ सरकार बनेर सञ्चालमा आएपछि बजेट खर्च बढेसँगै यसमा अझ सुधार आउनेमा आशावादी छौं ।
राजनीतिमा नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाका पक्षपातीहरूको वर्चस्व बढ्दा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सम्भव हुँदैन भन्नेहरू पनि छन् नि ?
यस्ता विरोधाभासहरूले निश्चितरूपमा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा प्रभाव त पार्छ । अहिले वाम गठबन्धनको बहुमत आएको छ । तर, उनीहरू नियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा जाने सम्भावना म देख्दिनँ । भौगोलिक स्थिति, उत्पादन र आपूर्तिका आयामहरूको अवस्थाले पनि यो सम्भव नै छैन । सरकारले चलाएका उद्योग र व्यापारको हविगत हामीबाट लुकेको विषय पनि होइन । निकट छिमेक चीनमै हेरौं न, त्यहाँको राजनीति साम्यवादी भए पनि आर्थिक नीति पूर्ण स्वतन्त्रतामा आधारित छ । चीनले सन् १९७९ देखि उदार अर्थनीति अपनाएर आर्थिक वृद्धिमा उदाहरणीय फड्को मार्यो् ।
यो उदारीकरणकै उपज हो । भारत र नेपालमा उदार अर्थतन्त्रबाटै अहिलेको आर्थिक विकास सम्भव भएको हो । जेजति भएको छ, त्यसैको परिणाम हो । यसकारण बजारमुखी अर्थतन्त्रको अन्य विकल्प छैन । विश्वभरि नै नियन्त्रित अर्थतन्त्रको सुखद अभ्यास कहीँ पनि देखिएको छैन । इमानदारीसाथ आर्थिक विकासको एजेण्डामा अगाडि बढ्ने हो भने हामीकहाँ सम्भावना अथाह छन् । स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन भए उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । उत्पादनमा लगानी बढाउनु नै आर्थिक विकासको जग बलियो बनाउनु हो ।
त्यसो भए अहिलेको देखिएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनबाट निजीक्षेत्र उत्साहित छ ?
दुई तिहाइनजीक बहुमत आएको बेलामा पनि नगरे कहिले गर्ने ? आर्थिक विकासमा अघि बढ्ने यो उपयुक्त मौका हो । अब राजनीतिक अस्थिरतालाई अविकासको कारण देखाउने सुविधा राजनीतिलाई छैन । अब राजनीतिक अस्थिरतालाई कारण देखाएर आर्थिक विकासबाट पन्छिन सक्ने अवस्था पनि छैन । तर, राजनीतिक नेताहरूका केही परस्परविरोधी बोली र व्यवहारले आशङ्का पनि उत्पन्न भएको छ । यहाँका लगानीकर्ता त असहजतामा पनि अभ्यस्त होलान् । तर, बाहिरकाले राजनीतिका यस्ता क्रियाकलाप हेर्छन् ।
उत्पादनका क्षेत्रमा बाहिरको लगानी ल्याउनु पर्छ । आन्तरिक लगानीमात्र पर्याप्त हुँदैन । अहिले पनि सत्ता प्राप्तिमात्र राजनीतिको अभीष्ट हो कि भन्नेजस्तो राजनीतिक नेतृत्वको आचरण देखिएको छ । लगानीकर्ता अहिले पनि पर्ख र हेरको अवस्थामै छन् । राजनीतिको फेरिँदो बोली र शैलीलाई हेरिरहेका छन् । नेतृत्वमा विकासको दूरदृष्टि हुने हो भने अबको ५ वर्ष अनुभूति हुने खालको परिवर्तनका लागि पर्याप्त हुन सक्छ ।
उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धिका आधार केके हुन सक्छन् ?
नेपालमा वाम गठबन्धनले अत्यधिक बहुमत पाएको छ । नयाँ बन्ने सरकारको नीति लगानीमैत्री भयो भने र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता भयो भनेमात्रै उत्पादनमूलक उद्यम र व्यवसायमा लगानी बढ्न सम्भव हुन्छ । लगानीकर्ताले पनि आफ्नो लगानी र आयको सुरक्षा हेर्छ । त्यसमा आश्वस्त हुने ठाउँ चाहिन्छ । भाषणले मात्र प्रत्याभूति हुन सक्दैन । तर, लगानीमैत्री नीति र कानूनी रूपमा यसको रूपान्तरण आवश्यक छ । त्यसअनुसार काम पनि भयो पनि निश्चय नै लगानीको वातावरण बन्छ ।
अहिलेसम्मको लगानी अभ्यास हेर्दा त प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीको प्रवृत्तिमा निकै भिन्नता देखिन्छ, कारण के होला ?
अहिलेसम्मको राजनीतिक परिदृश्य लगानीमैत्री थिएन । राजनीतिक र आर्थिक नीतिनियममा अस्थिरता थियो । राजनीतिक दलहरूको भनाइ र गराइमा फरक थियो । भएका पनि कार्यान्वयनमा एकदमै समस्या थियो । कसैले पनि आफ्नो लगानी जोखीममा राख्न चाहँदैन । यस कारण लगानीको कुरामात्र धेरै भयो, लगानी भने आएन । व्यापारमा अल्पकालीन लगानी हुन्छ । उत्पादनमा लगानी र जोखीम दुवै बढी हुन्छ । सरकारले उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने गरी नीतिगत सुधार गर्नु पर्छ । हाम्रोजस्तो सानो बजार र अर्थतन्त्रमा सहुलियत र अनुदानलाई उत्पादकत्वसित जोड्नु पर्छ । सहुलियतलाई उत्पादकत्व अभिवृद्धिको औजार बनाइनु पर्दछ । यस्तो नीतिले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्छ ।
अहिले औद्योगिक प्रतिष्ठानका लागि जनशक्ति उपलब्धताको अवस्था कस्तो छ ?
हामीकहाँ ऊर्जाशील जनशक्तिको आकार निकै ठूलो छ । यो अवसर त हो, तर ठूलो युवाशक्तिमा आवश्यक दक्षता भने छैन । उद्योगलाई आवश्यकता एउटा हुन्छ, त्यसअनुसारको जनशक्ति छैन । दक्षतामा पहिलाभन्दा सुधार भए पनि कतिपय यस्ता क्षेत्रमा असहजता उस्तै छ । अर्को, जनशक्तिमा अनुशासनहीनताको पनि समस्या छ । यो सबैले भोगिरहेको पनि छ । जागीर लिने, तर उत्तरदायित्वमा गम्भीर नहुने प्रवृत्ति छ । नयाँ श्रम ऐनले यसमा सुधार ल्याउने अपेक्षा छ । यसको नियमावली कस्तो बन्छ र कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ, यसमा उपादेयता भर पर्छ ।
आफूलाई चाहिएजस्तो जनशक्ति उत्पादनमा निजीक्षेत्रले नै लगानी गर्दा पनि हुन्छ नि, त्यस्तो किन नभएको होला ?
कतिपय प्रयास निजीक्षेत्रको बलमा मात्र सार्थक हुन सक्दैन । निजीक्षेको प्रयासबाट आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उपलब्ध हुन सकेको छैन । म वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुँदा वीरगञ्जमा पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्युट हुनु प¥यो भनेँ । वीरगञ्ज उत्पादनको केन्द्र भएकाले यहाँ खोल्नु पर्छ भनेर सरकारसँग माग गर्‍यौं । तर, त्यो अन्तै खोलियो । अब प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । अहिलेको जनशक्तिमा प्राविधिक ज्ञानको अभाव छ । त्यस्तो दक्षताले जागीर पाउँदैन र रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । बाहिर जानेमा अधिकांश अदक्ष जनशक्ति छ । अब हामीलाई कस्तो मानव संसाधन चाहिने भन्ने अनुसन्धान र अध्ययन गरेर सरकारले त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण र योजना बनाएर अघि बढ्यो भने त्यसमा निजीक्षेत्रको सहभागिता नहुने कुरै छैन ।
स्वदेशी उद्योगहरूमा नयाँ प्रविधिको उपलब्धता र प्रयोगको अवस्था कस्तो छ ?
नवीन प्रविधिको विकल्प छैन । पुरानो प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूले पनि अद्यावधिक गरिरहेका छन् । आधुनिकीकरण नभए उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सकिँदैन । नयाँ प्रविधिबाट उत्पादकत्व स्वतः बढ्छ । श्रम पनि कम लाग्छ । हामीले पनि पुरानो प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई सुधार गरिरहेका छौं । नयाँमा त नवीन प्रविधि नै आउने भयो ।
स्वदेशी उद्यमीले पारवहनको पूर्वाधार र अवस्थालाई कसरी हेरिरहेका छन् ?
पारवहनमा धेरै कठिनाइ छन् । पछिल्लो समयमा यो झन् सकसपूर्ण बनेको छ । वीरगञ्ज क्षेत्रको आन्तरिक र बाह्य पारवहन झनै समस्याग्रस्त छ । हाम्रो समूहले नै अहिले वीरगञ्जको सट्टा विराटनगरबाट मालसामान भित्र्याउन थालेको छ । कोलकाता बन्दरगाह र रेलवेका समस्याका कारण ३ महीनादेखि उतैबाट आयात गरिरहेका छौं । यहाँबाट खाली कण्टेनर पठाउन ढिला भयो भने जरीवानाले लागत बढी पर्छ । कण्टेनरमा ढेड महीनासम्मको विलम्व जरीवाना तिर्नु परेको छ । हाम्रो औद्योगिक समूहले मात्रै एक महीनामै करोडौं रुपैयाँ जरीवाना तिरेको छ । अहिले सिपिङ कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धाले केही वस्तुको आयातमा तुलनात्मक राहत भएको छ । वीरगञ्जमा निर्माण भएको नेपाल–भारत एकीकृत जाँचचौकी चाँडै सञ्चालन भयो भने केही सजहता हुने थियो । पछिल्लो समय वीरगञ्ज–रक्सौल नाकाको पारवहनमा झनै समस्या देखिएको छ ।
सरकारले सेज र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा जोड दिएको छ । यसबाट उत्पादन क्षेत्रलाई कत्तिको उत्साहित बनाएको छ ?
सेज र औद्योगिक क्षेत्रका कुरामात्र धेरै भए । बाराको सिमरामा सेज प्रस्ताव भएकै दशक पुगिसक्यो । अहिलेसम्म प्रस्तावित जग्गामा पर्खाल लगाउने कामबाहेक अन्य केही प्रगति भएको छैन । लगाइएको पर्खालसमेत भत्किइसकेको छ । उद्योगको सम्भाव्यता यो क्षेत्रमा छ । तर, सेज र औद्योगिक क्षेत्र अन्त बनाइन्छ । सिमरामा सेजको सम्भाव्यता बढी छ । वीरगञ्जसम्म आएको रेलवेलाई सिमरासम्म विस्तार गर्न सकिन्छ । यसबाट कच्चा पदार्थको आपूर्ति सजिलो हुन्छ । निकासी प्रवर्द्धनमा बल पुग्छ । यसै क्षेत्रमा गार्मेण्ट प्रवर्द्धन क्षेत्रको पनि कुरा आयो, तर उपलब्धि देख्न पाइएको छैन । यो क्षेत्रमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति अब अत्यन्तै कठिन काम भएको छ । अन्यत्र खोलिएका औद्योगिक क्षेत्र उपयोगविहीन अवस्थामा छन् । सुझबुझविना राजनीतिक आग्रहमा योजना बनाउँदा उपलब्धि हुँदैन ।
तपाईंको औद्योगिक समूहका आगामी योजनाहरू केके छन् ?
नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको बजारमा प्रचुर सम्भावना छ । त्यहाँ औद्योगीकरणको खाँचो छ । हामीले नेपालगञ्जमा सिमेण्ट उद्योग खोल्यौं । भर्खरै यो उद्योगलाई दैनिक ४ सय ५० मेट्रिकटनको क्षमताबाट १ हजार मेट्रिकटनमा स्तरोन्नति गर्यौंल । स्टील उत्पादनमा पनि हात हाल्ने योजना छ । यस्ता अधिकांश उद्योग वीरगञ्ज क्षेत्रमा केन्द्रित भएकाले यहाँबाट लैजाँदा ढुवानी खर्च बढी हुन्छ । त्यही क्षेत्रमा उत्पादन गर्दा सहज हुन्छ । त्यस्तै मकवानपुर, उदयपुर र अर्घाखाँचीमा क्लिङ्कर उत्पादनको योजना छ ।
पछिल्लो समय वीरगञ्ज क्षेत्रको उत्पादन र व्यापार अन्यत्र पलायन भइरहेको देखिन्छ, किन होला ?
यो समस्या छ । विगतको ६ महीने मधेश आन्दोलनपछि यो समस्या अझ देखिएको छ । पहिला पनि यो क्षेत्रमा सरकारी प्रोत्साहनका कारण औद्योगिक कोरिडोर बसेको होइन । वीरगञ्जको भौगोलिक अवस्थिति र लगानीकर्ताको मनोबलका कारण सबै सम्भव भएको हो । जतिबेला यहाँ उद्योग खुल्नेक्रम शुरू भयो, चौबीसै घण्टा बिजुली उपलब्ध थियो । सडक पूर्वाधार पनि राम्रो थियो । महेन्द्र राजमार्ग भर्खरै बनेको थियो । त्यसबेला विराटनगरबाट पनि यहाँ उद्योग आएका थिए । यो लगानीको प्रवृत्ति नै हो । जता सहज हुन्छ, त्यतै जान्छ । तर, भौगोलिक विशिष्टता र यहाँ विस्तार भएका र प्रस्तावित पूर्वाधार यस्ता छन्, यहाँबाट लगानी सधैंका लागि पलायन हुन सम्भव छैन । समुद्री बन्दगाह कोलकाताबाट नजिकको दूरी, रेलसेवा जोडिएको एकमात्र सुक्खा बन्दरगाह, निर्माण पूरा भइसकेको आईसीपीजस्ता उपलब्ध पूर्वाधार अन्त छैनन् । तर, यस्ता संरचनाको अधिकतम दोहन हुन सकेको छैन । द्रुतमार्ग र दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि त्यसले पनि यसै क्षेत्रको आधार बलियो बनाउने हुन् । सम्भावना भएकाले पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ भन्नेमा आशावादी छु ।
मदिराको प्रयोग नियन्त्रण वा निषेध के गर्न खोजेको हो ? स्पष्ट हुन जरुरी छ
९ जेष्ठ २०७५, बुधबार १४:२६
६ जेष्ठ २०७५, आईतवार ०८:०४
सर्वोत्कृष्ट संस्थागत सुशासन भएको विकास बैङ्क बन्छौं
३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार ११:४६
३१ बैशाख २०७५, सोमबार ११:३९